Gentoo Linux: ခရီးတစ်ခု၏ပုံပြင် FromLinux | ChrisADR Linux မှ
Gentoo Linux: ခရီးသွားခြင်း၏ဇာတ်လမ်း
ChrisADR | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
1 Gentoo Linux သည် ...
1.1 "ငါ" တစ်နည်းနည်း:
1.2 "မင်း" ၏နည်းနည်း
2 ပထမ ဦး ဆုံးအခနျး Ubuntu:
4 တတိယအခန်း Arch
5 အခန်းသစ် Gentoo:
7 Gentoo ကိုမြန်မြန်ကြည့်ပါ
7.2 ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများ -
Gentoo Linux သည် ...
မင်း ကျွန်တော့် Linux ဘ ၀ မှာအစပြုခဲ့တဲ့ဒီဖြန့်ဖြူးခြင်းအကြောင်းကိုတစ်ခုခုမပြောခင်အချက်အလက်အနည်းငယ်နဲ့စဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဦး စွာကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အားအနည်းငယ်ပြောပြခြင်းဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မည် (၎င်းသည်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေလျှင်သော်၎င်းသည်စာပိုဒ် ၂ ခုကိုကျော်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ။ )
ကျွန်တော့်နာမည်ခရစ်စတိုဖာ၊ ကျွန်တော်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် Linux ဖြန့်ချိမှုအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီး ၂ နှစ်ကျော်မျှနေခဲ့ပါပြီ။ ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောခရီးတစ်ခုဖြစ်သည် (ရှုပ်ထွေးမှုများကိုကျွန်ုပ်ဝန်ခံရမည် although သော်လည်း) ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်သည်များစွာသင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။
ပီရူး၊ လီမာတွင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျွန်ုပ်လေ့လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်၌အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားများနှင့်မူဘောင်များကိုငါတွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးအသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်သုတေသနအတွက်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတွက်လယ်ပြင်, ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်၏။
DesdeLinux သည်ဖြန့်ဝေမှုအမျိုးမျိုးရှိသောစပိန်စကားပြောသောသုံးစွဲသူများအတွက်အဓိကအစည်းအဝေးအချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအပိုဒ်များကိုဖတ်ရှုနေသူအားလုံးသည် Linux ဖြန့်ချိမှုကိုအသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုလိုသည်။ ပို၍ ရှေးရိုးစွဲအနေဖြင့်အခြား operating system အချို့နှင့်အတူ dual-system ကိုသုံးနိုင်လိမ့်မည်။ လများကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှဖြန့်ဖြူးခြင်းမှဖြန့်ဖြူးခြင်းသို့ပိုမိုမြန်ဆန်သွားလိမ့်မည်။ သင်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေကျွန်ုပ်၏ Linux ဇာတ်လမ်း၊ စွန့်စားခန်းများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကမ္ဘာကြီးကိုမျှဝေပါရစေ။
များစွာသောသူများအထူးသဖြင့်လက်တင်အမေရိကရှိဤကဲ့သို့သောငါငယ်ငယ်တုန်းက Linux ၏တည်ရှိမှုကိုမသိခဲ့ပါ။ ပြုပြင်မှုတစ်ခုစီအတွက်အမြန်ဆုံးဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အခကြေးငွေပေးရခြင်း၊ အတိုချုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တစ်ချိန်ချိန်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခြေအနေများ ၁၀၀၀ နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် disk disk အပိုင်းအစများကိုအမြဲတမ်းမကျေနပ်မှုခံစားခဲ့ရသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအခနျး Ubuntu:
ဆော့ဝဲလ်တီထွင်မှုကိုကျွန်တော်မလေ့လာခင် Ubuntu ကိုမိတ်ဆက်ပေးချိန်မှာဒါတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ Ubuntu ၏ Live USB သည်ပထမဆုံးလိမ္မော်ရောင်အရောင်၊ sidebar၊ အစဉ်လိုက်အသစ်နှင့်ပထမဆုံးသော့ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ငါ့အပလီကေးရှင်းများရှာဖွေခြင်းကိုပထမဆုံးမှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။ Windows ကို။
ငါမြင်ရတာကချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ကမ္ဘာသစ်၊ သင်ယူရမည့်အရာများနှင့်သင်၏အသင်းနှင့်အတူလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခြင်းရဲ့အတွေ့အကြုံသစ်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာလိုပဲကြာရှည်မခံခဲ့ပါ။ အရင်ဆုံးငါ repositories တွေဘာတွေ update လုပ်နေတယ်၊ ​​ဘယ်လို packet ကို update လုပ်ရမယ်ဆိုတာတောင်ငါမသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အဓိကကျသောဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လည်ပတ်မှုကို configure လုပ်ရန်ငါ့ကို (တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ) အချိန်ကြာမြင့်သောပရိုဂရမ်နှင့်အတူပြတင်းပေါက်မြင်နေရသည့်အခါထိ မိ၍ လဲစရာဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အားစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ဖြင့်ခံစားစေခဲ့သည်။
အချိန်တိုအတွင်းကျွန်ုပ်အတွေ့အကြုံနည်းပါးခြင်းကြောင့်ရာပေါင်းများစွာသော repositories, files, programs, etc စသည်တို့စတင်တပ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိလာသည်။ ဒါကြောင့်တစ်နေ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကို "ဒီနေ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တော့မယ်" လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ (ဒါကနှေးနေပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး၊ ငါမသုံးတော့တဲ့အရာတွေနည်းနည်းနဲ့သုံးတာကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်) နာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်၊ ငါအရင် install လုပ်ခဲ့တာထက်အများကြီးပိုများတာတွေ၊ ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ package တွေသူတို့ရဲ့ function တွေ၊ အထူးသဖြင့်ငါ့ system ထဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာသတိထားမိလာတယ်။
ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏အမြဲတမ်းတက်ကြွသောသိလိုစိတ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပိုမိုသောအရာများကိုရှာဖွေရန်တွန်းအားပေးခဲ့သည် ဤနည်းအားဖြင့်ငါထွက်ရှိ Linux ဖြန့်ဝေအမျိုးအစားအားလုံးကိုအကြောင်းကိုစတင်ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ Fedora, SUSE, CentOs လိုမျိုးနာမည်တွေကငါ့မျက်လုံးတွေထဲဖြတ်သန်းသွားတယ် ... ငါဟာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံယူတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုမတွေ့မချင်းဒီစာရင်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့တယ် ... Arch Linux ...
Arch Linux သည်ကျွန်ုပ်စိတ်ကိုဖြုန်းတီးစေသောဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Rolling လွှတ်ပေးရန်... ဒါဟာငါ့အာရုံကိုဖမ်းမိသောပထမ ဦး ဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ။ ဒုတိယအတွေးအခေါ် နမ်း။ မကြာခင်မှာပဲငါကဒီအကြောင်းအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ system ကိုနိမ့်ဆုံးကနေဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါဘာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာအတိအကျသိဖို့နဲ့အပိုပရိုဂရမ်တွေမလိုဘဲ၊ နောက်ထပ်ချိန်ညှိစရာမလိုဘဲကျွန်တော်လိုချင်တာကိုအတိအကျရခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တွင်စွမ်းရည်အလွန်နည်းသည်ဟုခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်လအနည်းငယ်တွင် Linux တွင်သာရှိခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် console installation နှင့်မကိုက်ညီကြောင်းထင်မြင်ခဲ့သည်။ ကြောက်လန့်မှုကကျွန်မကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီးပိုမိုရိုးရှင်းသည့်အရာကိုရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဒီအကြောင်းအရာကိုသိတဲ့လူတိုင်းအတွက် Manjaro ဟာ Linux ကမ္ဘာပေါ်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်သုံးစွဲသူများကို Arch Linux ၏ Rolling Release ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်အာရုံစူးစိုက်သောဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များသည်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်နှင့်၎င်းတို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်များစွာရှိသည် Pacman, Arch ရဲ့အထုပ်မန်နေဂျာ။
Manjaro Linux ကို
ငါ Ubuntu ကိုလေးလလောက်သုံးပြီး Manjaro နဲ့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုပြောခဲ့တယ် - "ဒါကိုမင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ပ်တော့ပ်ထဲမှာ Arch ကိုတပ်ဆင်တာနဲ့ပိုနီးလာလိမ့်မယ်။ " ၎င်းသည်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ကွဲပြားခြားနားသော kernel အမျိုးအစားများကိုမည်သို့လေ့လာခဲ့သည်ကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့သည် (နှင့် kernel ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေရန်) ။ ငါ packages အသစ်များကို install နိုင်ခဲ့နှင့် configurations နှင့်စနစ်က boot ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးအကြောင်းကိုအများကြီးလေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ virtual machine တွေမှာ Arch installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်စတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ ခုန်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး၊ အထက်တန်းကျောင်းမှာချေးငှားနိုင်မယ့်စက်ကို Arch ထည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်နှင့်စာအားမကြာခဏအွန်လိုင်းသင်ခန်းစာလိုက်နာပါ။ မျက်စိတမှိတ်၌ကျွန်ုပ်လက်တော့ပ်ပေါ်တွင်အပြီးသတ်တပ်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Arch Linux ကို
ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးထည့်သွင်းမှုတွင်ဆုတ်ယုတ်မှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux လောကနှင့် ပတ်သက်၍ အရာများစွာကိုမသိခဲ့သော်လည်းအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည်ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံနည်းနည်းခံစားပြီးပြီဖြစ်သည်။ သူကအခြားသူများစဉ်းစားသောစနစ်တစ်ခုကို install နိုင်ခဲ့သည် ခက်ခဲ ငါဒုတိယကြိုးစားမှုမှာအောင်မြင်ခဲ့တယ် (ပထမကငါအထက်တန်းကျောင်းကချေးထားတဲ့စက်ပေါ်မှာပဲ။ ) အချိန်တိုအတွင်းကျွန်ုပ်၏ system ကိုပြန်လည် install လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် configure (သို့) ပိုကောင်းအောင်တပ်ဆင်နိုင်သောအရာများစွာရှိနေသေးသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့လက်တော့ပ်ကို run ဖို့ငါဘယ်လောက်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာသိလာတယ်၊ terminal, command နဲ့ file location တွေပိုပိုပြီးအဆင်ပြေလာတယ်။
တစ်နေ့မှာအရာရာတိုင်းဟာအဆင်ပြေပါတယ်။ အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်ရင်းနဲ့ကျွန်မသိချင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့ခဲ့တယ်။
ဒါကဘာလဲ Arch Linux ထက်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါသလား။ Gentoo? Scratch From Linux? ... ကျွန်တော့်သိချင်စိတ်ကိုထပ်မံခေါ်ယူခဲ့သည်။ ဒီစိန်ခေါ်မှုအသစ်ကိုစဖို့အရင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။
Gentoo Linux ကို
Gentoo အကြောင်းပြောသောအခါပထမဆုံးတွေ့ရလိမ့်မည် စာရွက်စာတမ်းများ, စာရွက်စာတမ်းများအများကြီး။ The Gentoo ဝီကီ ထောင်နှင့်ချီသောပရိုဂရမ်များနှင့်ဆက်တင်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သောအလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြေခံအကျဆုံးမှာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအစုအဝေးဖြစ်သည် Gentoo လက်စွဲစာအုပ်။
လက်စွဲစာအုပ်၌ Gentoo ကိုခြစ်ရာမှတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှာဖွေနိုင်သည်။ အသေးစိတ်နှင့်ရှင်းလင်းစွာနားလည်နိုင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရှင်းပြထားသည့်ဤလက်စွဲသည် Gentoo Linux တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ငါတပ်ဆင်ခြင်းကိုငါတတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးရွှေ့ဆိုင်းထားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရမယ်၊ ငါအဲဒါကိုမပြီးနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တနင်္ဂနွေတစ်ရက်မှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ငါ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲစေမယ့် installation ထဲကိုငါစတင်ခဲ့တယ်။ Linux ကိုကြည့်ပါ။
ဒီဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော့်ကို ၂ ရက်အကြာမှာ (စာမဖတ်ခင်တစ်ရက်၊ စုစည်းခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းကြားကတစ်ရက်) အချိန်အကြာကြီးယူပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Gentoo မှာ binary copy တစ်ခုကိုကူးယူမယ့်အစားသင့်ရဲ့ပရိုဂရမ်တွေအားလုံးကိုစုစည်းနိုင်လို့ပဲလို့ငါပြောတယ်။ pacman, apt သို့မဟုတ်ပင် yum။ အရှည်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုမှာ kernel၊ configuration အစိတ်အပိုင်း၊ options များကိုဖတ်ခြင်း၊ လိုအပ်သောအရာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံအသစ်များသည်ကျွန်ုပ်ယခုအချိန်အထိမြင်တွေ့ခဲ့ရသောအခြားဖြန့်ဝေမှုများမှလွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ GNOME desktop environment ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်တာ၊ မောက်စ်ကိုရွှေ့တာ၊ ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်မှာပြီးမြောက်ခဲ့သမျှတွေကိုမြင်တာဟာလုံးဝစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါတွေအားလုံးကဇန်နဝါရီလမှာဖြစ်ခဲ့တာ။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးဒီထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြန့်ဖြူးမှုအကြောင်းနေ့တိုင်းငါထပ်လေ့လာတယ်၊ ကွန်ပျူတာကိုငါမသုံးတော့တဲ့အထိအဲ့ဒီမှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဤသည်မှာ Gentoo ဖြင့်တတိယအကြိမ်မြောက်တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်မှုတစ်ခုစီတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဟာ့ဒ်ဝဲမှအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိခြင်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများလုံးဝကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသိရခြင်းမှစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခြင်းကိုခံစားနိုင်သည်။ ငါကအလုပ်လုပ်တဲ့သူပါ။
ငါ Linux From Scratch ကို install လုပ်ရန်လည်းကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါပရိုဂရမ်တစ်ခုချင်းစီကိုအစမှနင်းစုပြီးကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့အတွင်းမှစုဆောင်းထားကြောင်းကျွန်ုပ်သိထားရမည့်အခြားအံ့သြဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကိုသိရှိပြီးကျွန်ုပ် terminal ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော်ဤအချက်သည် Gentoo တွင်ဆက်လက်ရှိနေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖြန့်ဖြူးမှုကိုဆက်လက်ခံစားရန်အကြောင်းပြချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။
ဒီစွန့်စားမှုအဆုံးမှာ Gentoo ကိုအောက်ပါအကြောင်းပြချက်များဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည် -
၎င်းသည်အမြဲတမ်းမှန်ကန်လိမ့်မည်၊ ခြစ်ရာကနေ Linux သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပေမဲ့၊ လုံခြုံရေးအားနည်းချက်တွေရှိနေရင်၊ (သို့) သင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာနောက်ဆုံးဆော့ဗ်ဝဲရှိချင်ရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
Gentoo စာရွက်စာတမ်းများသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အရာအားလုံးသည်တစ်နေရာရာတွင်ရှိသည်၊ စာဖတ်ရုံမျှသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကရှာမတွေ့ပါက IRC တွင်အကြံဥာဏ်တောင်းခံသူတစ် ဦး ဦး ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနိုင်သည်။ များစွာသောသူတို့သည်အလွန်ဖော်ရွေကြပြီးစကားမပြောနိုင်ကြသော်လည်းအများစုသည်အမြဲတမ်းလူတိုင်းကိုကူညီနိုင်သည့်အနေအထားတွင်ရှိသည်။
Gentoo ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ မင်းကအရာအားလုံးကိုတည်ဆောက်တယ်၊ အရာအားလုံးကအရာအားလုံးပါ။ ဒါပေမယ့် Linux နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကကွာခြားချက်ကတော့သူက install လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ PortageGentoo ၏ package manager သည်အလွန်အမင်းစွယ်စုံသုံးပြီးသင်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များ၏ attribute များကိုအသေးစိတ်နှင့် (ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်) ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာဒီပြင်ဆင်မှုကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းကိုအများအားဖြင့်ညှစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ သင့်လက်ပ်တော့ပ်သည်ခေတ်မီပြီး Gentoo ကိုမသုံးပါက၎င်းသည်၎င်း၏အလားအလာများစွာဆုံးရှုံးနေသည်။
အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုဝေးကွာစွာဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုလျှင် Linux သုံးစွဲသူများအားပေးသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်၏စက်ကိုရှုထောင့်တိုင်း၌သိခြင်း၏စွမ်းအားသည်သင်ကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဖြစ်ပါကသင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့်စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့သိချင်စိတ်ကမင်းကိုအသစ်သောအရာတွေကိုကြိုးစားဖို့လှုံ့ဆော်မယ်ဆိုရင်ငါသာအကြံပေးနိုင်ပါတယ် လုပ်ပါ! အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ၊ buts များမပါဘဲ၊ သင်ပထမဆုံးအကြိမ်မရရှိလျှင် ဆက်၍ ကြိုးစားပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်မည်မျှလေ့လာသင်ယူပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Gentoo Linux: ခရီးသွားခြင်း၏ဇာတ်လမ်း
ဂျေ Garcia ဟုသူကပြောသည်
ရွေးချယ်မှုသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်း၊ Gentoo ကိုသင်တတိယအကြိမ်တပ်ဆင်ခြင်းသည်၎င်းသည်စနစ်သည် disk တစ်ခုမှတစ်ခုသို့တစ်ခုသို့လက်တွေ့ကျကျသွားနိုင်သည်ဆိုပါကသင်ဘာကြောင့်ဤသို့ပြောရသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Windows တွင်လုံးဝဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လွန်သွားသည့်အခါကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ ext4 to hdd ...
Gentoo သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြသနာအားလုံးနီးပါးကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖြေရှင်းပြီးပြီဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ kernel ကိုအကူအညီတောင်းသည်။
Portage ၏ package များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သင်သည်နောက်ဆုံးမိနစ်တွင်မည်သည့်ပုံစံကိုအသုံးပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်သောကြောင့်မှီခိုမှုပြိုကွဲမှုများစွာကိုသင်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
J. Garcia သို့ပြန်သွားပါ
Hello J. Garcia၊ ရိုးရိုးလေးပါ၊ ပထမအကြိမ် install လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် options များစွာကိုထားခဲ့ပြီး၎င်းကိုလုံခြုံစွာကစားရန်ကြိုက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယတစ်ခုအနေဖြင့်ငါ portage ကိုအနည်းငယ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်ထားပြီးငါလိုအပ်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုစီအတွက်အစားထိုး USE အလံများထည့်နိုင်သည်။ တတိယအကြိမ်ငါ kernel နဲ့စတင်အလုပ်လုပ်တယ်။ ကွန်ပျူတာဘယ်တော့မှသုံးမှာမဟုတ်တဲ့ driver တွေကိုလွှတ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတတ်နိုင်သလောက်တိုးတက်အောင်လုပ်တယ်။
Joshua Beta ဟုသူကပြောသည်
ငါ Debian ကို (၄) နှစ်လောက်အသုံးပြုခဲ့ဖူးတယ်။ (ငါ Puppy ကိုငါခဏသုံးခဲ့တယ်) ။ Linux ကိုငါရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကငါသုံးခဲ့တဲ့ Linux ပဲ။ Gentoo သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည်၊ သို့သော်တစ်နေ့တွင်၎င်းကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်ရန်အတွေ့အကြုံများစွာယူနိုင်သည်။ xD
Joshua Beta ကိုပြန်ကြားပါ
အချိန်အနည်းငယ်နှင့်အတူဟားမားနှင့်ဆောင်းပါးကောင်းစွာလက်ခံရရှိလျှင်ငါအနည်းငယ်အလေ့အကျင့်နှင့်အတူတပ်ဆင်သည့်အခါအသုံးအများဆုံး၏လမ်းညွှန်များအသေးစားလုပ်ကတိပေး it အားလုံးကုဒ် 15 ခန့်ခန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းမှဆင်းလာပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးဖြစ်သည်။ linux ဖြန့်ဖြူးမှုကို install လုပ်သည့်အခါဤမေးခွန်းသည်အမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်ကိုအကြံပေးသည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကိုမေးသောအခါသူကအလွန်အားကောင်းတဲ့ linux ဖြန့်ဖြူးမှု slackware ကို install လုပ်ရန်ပြောခဲ့သည်။ packages များပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေနိမ့်ခြင်း၊ သူကကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်နှင့်ကြိုတင်တွက်ချက်ထားသည့် operating systems များကိုအသုံးပြုသောဖြန့်ဖြူးမှုအားလုံးကိုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်မှသူတို့သည်လဲကြလိမ့်မည်။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုနားထောင်ခဲ့တယ်၊ ဒီ operating system ကိုကိုင်တွယ်ရတာမလွယ်ကူဘူး၊ ငါအကုန်လုံးကိုစုဆောင်းရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အမှားမျိုးစုံပေးခဲ့ဖူးတယ်၊ အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့အထိအလုပ်လုပ်နေတယ် gentoo နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ slackware လား။
Gentoo သည် FreeBSD တွင်အရင်းအမြစ်များရှိပြီးအနည်းဆုံး ၄ င်း၏ package management system portage ဖြစ်သည်။ Linux ကခြစ်သလိုပဲ Slackware ဟာခက်ခဲပြီးထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသည်။ အကယ်၍ Apache သို့မဟုတ် web proxy ကဲ့သို့သော web server ကိုသာ run ရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းတို့သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပရိုဂရမ်များနည်းပါးခြင်း၊
သို့သော်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများအတွက်တော့မလွယ်ကူလှပါဘူး။ လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုမွမ်းမံချင်တယ်၊ အထူးသဖြင့် update လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကအရမ်းငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတယ်။ Rolling Release system ရှိသည့် Gentoo သည်“ emerge -avUD @world” မှတစ်ဆင့် software အားလုံးကို update လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Portage သည်မှီခိုမှုအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး၊ အလွန်ရှားပါးသောအခြေအနေများအောက်တွင်အခြားလက်စွဲစာအုပ်တစ်ခုခုလိုအပ်လိမ့်မည်။
နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ (အခြားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကဲ့သို့) ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောလုံခြုံရေးအထောက်အပံ့သည်သင်၏ glsa-check မှတဆင့်သင်၏စနစ်တွင်အားနည်းချက်များရှိနေသည့်အထုပ်ရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်သည် ...
Slackware အသိုင်းအဝိုင်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် Gentoo အသိုင်းအဝိုင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အတော်အတန်တက်ကြွနေပြီးအမြဲတမ်းကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နေသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် Portage သည် FreeBSD port များနှင့်တူသည်၊ သို့သော်မဟုတ်ပါက Slackware သည် Debian / BSD, Gentoo / BSD စသဖြင့်မှ လွဲ၍ Linux ဖြန့်ချိမှုများတွင်တွေ့နိုင်သည့် BSD နှင့်အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ Slackware သည်အစတွင်ထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်သင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်လေ့လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။
အကယ်၍ နောက်တစ်ကြိမ်တွင်၎င်းကိုလက်တွေ့ကျကျပြသနိုင်ခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲအဆင့်များ၊ အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာများသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုဖြင့်ပြသခြင်း - မဖြစ်သင့်ပါ။
ထည့်သွင်းမှုလက်စွဲကိုဘာသာစကား ၆ ခုကျော်ဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသည်
ငါအချိန်အနည်းငယ်ကုန်သည်နှင့်လက်တွေ့လမ်းညွှန်စာအုပ်ငယ်တစ်အုပ်ကိုစတင်ရေးသားတော့သည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးပို့စ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ပြောပြရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌စိတ်ဝင်စားသူများရှိမရှိ၊ ပထမတစ်ခုမှာအခြေခံထည့်သွင်းမှုသင်ခန်းစာကိုစတင်ရေးသားရန်ကျွန်ုပ်ဆန္ဒရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်လက်စွဲ၌တစ်ချိန်ကတွေ့ရှိခဲ့သောအရာများနှင့်အလွန်ကွဲပြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ I
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်သင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒရော့စ်များကိုခြစ်ရာမှတပ်ဆင်ရန်စိတ်ကူးခဲ့သည်၊ သို့သော် ပို၍ တိုတောင်းလာသည်နှင့်အမျှသင့်မိသားစုအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချလိုသောအလုပ်များ၊ ငါ့သမီးကထိုလူနေမှုပုံစံကိုမေ့သွားစေသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ Gnu / Linux လောကအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိပြီး Archlinux အကြောင်းကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ Rolling Release, KISS အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီး Gentoo သို့ပြောင်းရွှေ့လိုသောဆန္ဒနှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ပိုရမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ASUS ၆ ခုမြောက်မျိုးဆက် Debian ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဗွီဒီယိုကဒ်နှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တွင်ပြproblemsနာများရှိခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးအရာသည်ခက်ခဲသည်မဟုတ်သော်လည်းဗွီဒီယိုကဒ်သည်အခြားစခရင်နှင့် / သို့မဟုတ်ပရိုဂျက်တာဖြစ်သော SmarTV သို့ဆက်သွယ်ရန်အဆင်မပြေခြင်းဖြစ်သည် ငါကြိုးစားချင်ပါတယ်၊ ငါ Python developer၊ ကလေးဆရာ၊ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်နှင့်မိသားစုရဲ့ဂုဏ်ယူတဲ့ဖခင်တစ်ယောက်ပါ။ Gentoo နဲ့အတူလက်တွဲဖို့ရက်အနည်းငယ်လောက်ပေးဆပ်ရန်မျှော်လင့်ပါတယ်
မင်းပြောချင်တာက Statick ဟာကောင်းတယ်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဦး စားပေးရမယ်ဆိုတာကောင်းတယ်။
Gentoo အတွက်စက်ကသင့်စက်သည်အလွန်ကောင်းမည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ 🙂စွမ်းအားကောင်းသောပရိုဆက်ဆာများသည် portage ၏ဘက်စုံကိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ i7 Gentoo နှင့်အတူပျံသန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်တိုင်း CPU များအားလုံး ၁၀၀% ဖြင့်ကြည့်သည်။ ။ (၁၀၀% ကဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိုဂရမ်တွေကိုပြုစုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်စွမ်းအားအားလုံးကိုသုံးဖို့ပြောတာ၊ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့် Virtualbox (သို့) Chrome လိုမျိုးအရာတွေကိုမွမ်းမံနေစဉ်) သုံးလို့ရတယ်။
Python နှင့်ပတ်သက်လျှင် Portage သည်သင်အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်သည် - ၎င်းသည် Python ၌လုံးလုံးလျားလျားရေးသားထားသည့်အပြင်အသိုင်းအဝိုင်းမှဖွံ့ဖြိုးသောအစီအစဉ်များသည် python တွင်လည်းရှိသည်။
Gentoo သို့သင်ခုန်နိုင်သည့်အခါအလွန်ပျော်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်လိမ့်မည်။ မမေးရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်လျှင်။
ငါ့အတွက် Gentoo Linux သည်ဖြန့်ဝြေခင်း၏အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ကြိုးပမ်းမှု ၂ ကြိမ်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ laptop (တတိယမျိုးဆက် core i2) တွင်တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ systemd နှင့် Gnome တို့နှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုသတိပေးသော်လည်း၎င်းကိုငါစီမံနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့ Arch Linux မှာလုပ်ခဲ့တာထက်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်နိမ့်ခဲ့တဲ့သတိပေးချက်များဟာအချည်းနှီးမဟုတ်ခဲ့ဘူး။
ငါဟာ Linux Linux ကို Gnome နဲ့သုံးတယ်။ Gentoo Linux ကို Gnome နဲ့သုံးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါ masked packages များနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့နှင့်ငါပင်စဉ်းစားဘူးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနားလည်ရန်ရှိသည်။
ငါပိုပြီးစွမ်းအားကြီးတဲ့ PC တွေရှိရင် Gentoo ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဒီ distro ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့။ သင့်ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲထဲကအကောင်းဆုံးကိုရယူပါနှင့်ပိုမိုခေတ်မီပိုကောင်း
Gento ကို Gnome နဲ့ဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုသင်သင်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျပါတယ်။
ငါဒီဇာတ်လမ်းကိုကြိုက်တယ်၊ အဲဒါက Gentoo ကို install လုပ်ဖို့ငါ့ကိုအားပေးတယ်။ မကြာခင်ပြန်ဆုံကြမယ်…
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ Gentoo ၌ systemd နှင့် GNOME ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းအနည်းငယ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ရိုးရိုးလေးပါ။ မကြာမီကျွန်ုပ်သည်ထိုဆောင်းပါးနှင့်စတင်ပါတော့မည်။
Javier Gutierrez လမ်း ဟုသူကပြောသည်
Javier Calle Gutierrez အားပြန်ပြောပါ
၎င်းကိုမျှဝေရန်ကောင်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် GNU / Linux နှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမျှဝေရန်နှင့် Linux ရှိကျွန်ုပ်၏စွန့်စားမှုအနည်းငယ်ကိုမျှဝေရန်စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်သည်။
ခရစ္စတိုဖာ၊ ခင်ဗျားခရီးစဉ်ရဲ့ပုံပြင်တွေကဘယ်လောက်ကောင်းသလဲငါတို့ဟာများသောအားဖြင့်တူညီတဲ့မှတ်တမ်းကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Gentoo အသုံးပြုသူတစ် ဦး မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ရပ်ရွာရှိအဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး ၏ကွန်ပျူတာများတွင်သာ distro ကိုအကြိမ်များစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းသင်၏ဆောင်းပါးနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကကွန်ပျူတာစတင်ဖွင့်ခြင်းကို ဦး စားပေးမည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ Gentoo ထည့်သွင်းထားသည်
desdelinux အသိုင်းအဝိုင်းအားသင်ပေးအပ်သည့်အလှူငွေအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤတွင်သင့်အားမကြာခဏဖတ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ဗဟုသုတများကိုမျှဝေရန်ဆန္ဒရှိသောသူများ။
အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အိမ်သူအိမ်သား🙂 my ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ကိုအခြားသူများနှင့်မျှဝေနိုင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုကြိုးစားကြိုးစားရန်နှင့် Gentoo တွင်စပိန်စကားပြောအုပ်စုငယ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အားပေးခြင်းသည် ၀ မ်းမြောက်စရာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှလူများဖြစ်သည်၊ သို့သော်လက်တင်စကားများနှင့်ဟစ်စပန်းနစ်စ်အနည်းငယ်သာသည် reet နှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ မကြာမီကျွန်ုပ်မျှဝေရန်အခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိလာမည်။
Gentoo ကိုအမြဲတမ်းတပ်ဆင်ချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခြားအရာတစ်ခုအတွက်ငါဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ blog ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါ Gentoo / Funtoo ကိုပြောင်းဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ၊ VM haha ​​ကိုအရင်လေ့ကျင့်ပါ။
Funtoo ကိုမင်းတွေ့ပြီ၊ အဲ့ဒီကိုသွားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Gentoo ကိုချပစ်ရမလားမသိဘူး
ဟုတ်ပါတယ်၊ Funtoo ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်၊ နောက်ပြီး Gentoo ဖန်တီးသူလည်း Funtoo ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုးသားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတပ်ဆင်ခဲ့ပါ။ အရင်းအမြစ်ကို ဦး တည်လိုတဲ့ Manjaro နဲ့ Arch တို့လိုအတူတူဘဲ Arch ကိုအမြစ်ဖြစ်ဖို့ကြိုက်ပါတယ် , ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်း Funtoo ထံမှအလွန်ကောင်းသောကိုးကားကြား၏🙂 Regards
သူငယ်ချင်းက yoyo ကိုလူအုပ်ဆီပို့ပေးလိမ့်မယ်
Michael Stevens ကိုပြန်ပြောပါ
ဟားဟား၊ ငါသိပ်ကိုနားမလည်ဘူး၊ စာဖတ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မယ်၊ စပိန်ကလာတာဖြစ်မယ် (ဒီပီရူးမှာကျွန်တော်တို့ဟာ "အေး" ကိုမသုံးကြဘူးလို့ထင်တယ်) ဒါပေမယ့်လူအများအပြားရှိရင်ကောင်းမယ်။ Gentoo အသိုင်းအဝိုင်း - အထူးသဖြင့်သူတို့ကစပိန်စကားပြောရင်။
ဆောင်းပါးဟာ LINUX လောကကိုနှစ်သက်တယ်။ ငါလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်အဲဒါကိုလုပ်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ၊ ရပ်ရွာထဲတွင်လုပ်ပါ၊ လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ဒphilosophနတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကအရမ်းကောင်းတယ် ငါကြိုက်တာတစ်ခုခုကတော့အရသာအမျိုးမျိုးအတွက်အရိုးရှင်းဆုံးကနေအရှုပ်ထွေးဆုံးအထိသွားတဲ့ distros တွေရှိတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 🙂right🙂🙂 right 🙂 right right right right right right right right you very very you you Thank you Thank you you you Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank you you Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank Thank you Thank Thank ကျေးဇူးတင်ပါတယ် you သင်မှန်ပါသည်၊ ဤအရာအလုံးစုံ၏အလှအပမှာလူတိုင်းကသူတို့နှစ်သက်သောအရာကိုတွေ့ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုသောအခါအလွန်လွတ်လပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ🙂
Alberto cardona ဟုသူကပြောသည်
သူကပြောတယ် သငျသညျငါ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲ hahaha ခံစားမိစေ၏
ငါ Gentoo ကနေတစ်နှစ်ကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ ငါ Bunsen Labs အသုံးပြုသူပါ။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောပစ္စည်းတွေတပ်ဆင်ခဲ့တယ်၊ ဒီဟာတွေအများကြီးတပ်ဆင်ခြင်းမှ hard drive နှစ်ခုပြီးပြီ။ အမှန်မှာသင်၏ဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်အမင်းလှုပ်လှုပ်စေသောကြောင့်၎င်းကိုမီးလျှံနှိုးပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးအကြိမ်ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ကျွန်ုပ်ရှိနေခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်ကဒ်နှင့်ပြproblemsနာများအမြဲတမ်းရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီ posting အတွက်တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရမ်း ၀ မ်းသာစရာကောင်းတယ်၊ အရမ်းကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ။
Alberto Cardona အားပြန်ပြောပါ
သင်၏စကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 🙂သင်၏ကဒ်သည်ပြtroubleနာများစွာဖြစ်စေလျှင်၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်မှတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားပါ၊ အရာအားလုံးကိုပြုပြင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
နယ်လ်ဆင် fonseca ဟုသူကပြောသည်
ငါအစပိုင်းမှာတော့အဲဒီအကြောင်းကိုတကယ်မစဉ်းစားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ဒါဟာအလွန်ကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးပါ။ Gentoo ကိုလည်းငါကြိုက်တယ်ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ငါနှစ်ပေါင်းများစွာမထိခဲ့ဘူးလေ။ Judd Vinet ကညွှန်ကြားတဲ့အချိန်မှာ Arch နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ အပြာနုနဲ့အပြာရောင်က A logo ရှိတယ်။ Judd Vinet က Arch Linux ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မတ်လမှာစတင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းကငါမှတ်မိတယ်။ ငါဒီနေ့ Arch အတွက်သင်၏တိုးတက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့မှာ Gentoo ကိုငါပြန်ရတော့မယ်၊ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကငါ့ကိုမကြာမီပြုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ အမှန်တရားကတော့ Gentoo နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ package တွေဟာ Arch လိုမျိုးကြိုတင်မပြင်ဆင်ရသေးတဲ့အတွက် kernel update လုပ်ခြင်းကသင့်ကိုအချိန်များစွာကြာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ kernel နှင့်အခြား update package များ၊ ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့တွင်ယနေ့ broadband ဆက်သွယ်မှုမရှိသောကြောင့်အင်တာနက်တစ်ခုလုံးသည်အလွန်နှေးကွေးနေသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ကျွန်တော်ဟာဆော့ဖ်ဝဲရေးသူမဟုတ်ပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာ web developer တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်၊ ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး၊ operating system နဲ့ virtualization အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ Linux လောကကိုသိကျွမ်းလာကတည်းကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့် OpenSource အစားထိုးများအကြောင်းကိုသာလေ့လာသင်ယူရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဆက်ပြီးဆက်သွယ်ချင်ပါတယ် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံBogotáမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။
Nelson Fonseca သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ နယ်လ်ဆင်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနေ့ Gentoo ကိုသုံးဖို့ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့်ခေတ်မီပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအများစုကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေကတော်တော်လေးသွေးဆောင်စရာပါ , နှင့်အကယ်စင်စစ်ငါသည်သူတို့သေးငယ်တဲ့အမှုအရာရင်တောင်ငါသူတို့ပူးပေါင်းပါရန်တစ် ဦး ထက်ပိုကူးစက်နိုင်ပါတယ် share ဒါဟာမျှဝေဖို့အမြဲပျော်မွေ့သည်နှင့်သူတို့သည်အကယ်စင်စစ်သူတို့သည်ငါ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာနှင့်အတူမြင်လျှင်လိမ့်မည်, အင်တာနက်ကျွန်တော်တို့ကိုပူးပေါင်းဘယ်မှာ။ 🙂နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
အခမဲ့ Quixote ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်သူ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိကျွမ်းခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် GNU / Linux ကိုတစ်နှစ်ကျော်မျှသာအသုံးပြုခဲ့သည် (Debian သည်အဓိက repos ဖြင့်သာ) နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမည်မျှသတိပေးသည်ကိုသင်ပြောပြသောခရီးကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းသည်ဤကဲ့သို့သောငါသည်ဤစီးရီးကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစွာနှင့်အတူလိုက်နာပါလိမ့်မယ်နှင့်အဘယ်သို့ငါ Gentoo မဟုတ် install လုပ်ဖို့လက်ပ်တော့ဘယ်လိုရှိသနည်း
ငါဖြန့်ဝေ၏ပုံရိပ်၏ဇာစ်မြစ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ဖို့အလွန်စပ်စုမိပါတယ်, သင်နီးကပ်စွာ link ကိုရှိပါသလား
Free Quixote အားစာပြန်ပါ
သေချာတာပေါ့! Gentoo ကသင်၏နောက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ 😉ကံမကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်ပုံရိပ်အတွက်မူလရင်းမြစ်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့သွားသောအင်တာနက်နက်နဲသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ , URL ကိုဘယ်မှာထားရမည်ကိုငါသိ၏😉နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
ကားလို့စ် AM ဟုသူကပြောသည်
ဂုဏ်ယူပါတယ် Chris ။ ခင်ဗျားရဲ့မှတ်ချက်တွေကအရမ်းကောင်းတယ်။ ငါ linux ကိုသုံးနှစ်ကြာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာမှမချန်လှပ်ထားပါဘူး။ Archlinux, deepin နဲ့ KaOS ရှိတယ်။ Gentoo ကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းပဲ။ https://rootsudo.wordpress.com/2014/09/14/manual-casi-facil-para-instalar-gentoo-paso-a-paso/ ကံမကောင်းတာကတော့ငါဟာပျောက်ဆုံးသွားပြီးတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့တယ်။ Gentoo, Greetings နဲ့ forward ကို install လုပ်ဖို့သင်ခန်းစာတစ်ခုတင်မယ်
Carlos AM အားပြန်ကြားပါ
ဤသင်ခန်းစာသည်မကြာမီထွက်တော့မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်မည်သည့်ပြconsultနာကိုမဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်လက်စွဲစာအုပ်ကိုအမြဲတမ်းထားရှိရန်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်သည်။ 🙂ငါအပြည့်အဝ configured လုပ်ထားသော distro မှပြုလုပ်ရန်အကြံပေးသည်။ ကန ဦး configurations ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအခါတိုင်း My part Arch မှ Gentoo ကို install နှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်တပ်ဆင်ခြင်း၌ကံကောင်းပါစေ
ဆောင်းပါးသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ Gentoo ကို install လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် FreeBSD ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသည်ကိုငါမသိ။ systemd တစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးနေသော systemd၊ linux / gnu တွင် systemd မရှိသောစနစ်အနည်းငယ်သာရှိပြီးတစ်ခုမှာ gentoo ဖြစ်သည်။ ငါကဘာမျှမပြုစုကြိုက်နှစ်သက်ကြဘူး။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် FreeBSD တွင် CLI ကိုတစ်ခါမှမစွန့်ခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကျွန်ုပ်မကြုံတွေ့ခဲ့ပါ၊ သို့သော်အမှန်တရားကိုပြောပြရန်မှာကျွန်ုပ်အားပိုမိုလွယ်ကူပုံရသည်။ အနည်းဆုံး FreeBSD ရှိအဆင့်တိုင်းကိုသင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောသော installer တစ်ယောက်ရှိသည်။ 🙂ကောင်းပြီ၊ ငါသိတာက Gentoo မှာရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။ အရာအားလုံးအကြားရွေးချယ်နိုင်တယ်၊ ၎င်းမှာ init စနစ်တွေလည်းပါဝင်တယ်
Alfredo M ဟုသူကပြောသည်
Gentoo အချိန်ကြာမြင့်စွာငါ့အာရုံကိုဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ linux ကို ၁၅ နှစ်ကျော်အသုံးပြုခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီခရီးစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သိလိုစိတ်နှင့်ဗဟုသုတအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခရီးစဉ်အတွက်ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။
Alfredo M ကိုစာပြန်ပါ
Jeanpier subero ဟုသူကပြောသည်
Jeanpier Subero အားပြန်ပြောပါ
Min: စမတ်၊ မြန်ပြီးထိရောက်သော web browser